Lalao 5 tsy azonao adino amin'ny finday Android | Androidsis
Aaron Rivas | | Fitaovana Android, Lalao Android
Betsaka ny lahatsoratra fanangonana izay efa nataontsika tao amin'ny Androidsis. Ao amin'izy ireo isika dia mifampiraharaha amin'ireo fampiharana amin'ny karazany rehetra ary, mazava ho azy, lalao amin'ny karazany isan-karazany, ary izy ireo dia iray amin'ireo faritra be mpamaky indrindra, satria mifantoka amin'ny fitanisana ny tsara indrindra amin'ny karazany tsirairay izahay.
Amin'ity fotoana ity dia manolotra anao izahay andiana lalao izay tsy maintsy anananao eny na eny amin'ny findainao Android. Hahita lalao tena ilaina ianao izay tsy iharan'ny sokajy na sokajy manokana, hahafahanao mahita ny sasany izay mihazakazaka, ny hafa momba ny ady, ny hetsika ary ny fanatanjahan-tena, ankoatry ny hafa.
Eto izahay dia mitondra andian-tsarimihetsika 5 finday tsara indrindra ho anao izay tsy azonao adino; ambonin'izany, tena ilaina izy ireo. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo iray na izy rehetra. Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola bitika anatiny, izay ahafahana miditra amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa ny fampiasa premium sy mandroso. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatona azy.
1 Tantaran'i Lep
2 Fanafihana Galaxy: Alien Shooter
3 PAKO mandrakizay
4 Ninja mpiady: angano ny lalao traikefa nahafinaritra
5 Ny fikambanana miafina - ny fiarahamonina miafina
Natombokay tamin'ny fomba maoderina niaraka tamin'ny Lep's World ity lalao ity, lalao iray, noho ny lohaheviny sy ny maha-sehatra tena nahomby azy, dia mampahatsiahy anay betsaka an'i Mario Bros avy amin'ny Nintendo. Raha ny tena izy, ity lohateny ity dia aingam-panahy avy amin'i Mario, Ka tsy mahagaga raha mikasika ny nostalgia mihoatra ny iray.
Ary izany ve i Lep's World dia lalao miaraka amina toetra iray izay tena be fitiavana ihany koa. Miatrika goblin mijery sariitatra sy mahafinaritra isika, izay tanjona ny hanangona ny vola madinika rehetra, hialana ireo sakana sy fahavalo, ary koa hamongorana azy ireo, ary koa handresy ireo tontolo sy sehatra tsy mampino izay samy hafa be, satria misy maro ao, izany hoe maninona no tsy mora ny mankaleo amin'ity lalao sehatra ity.
Izany indrindra no antony nametrahantsika azy ato amin'ity lisitra ity, satria koa anaram-boninahitra azo lalaovina amin'ny fotoana sy amin'ny toerana rehetra, satria lalao izay tsy mila fifandraisana Internet. Izany no antony, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, dia mety ho tsy hita avy amin'ny findainao Android.
Ao amin'ny fanontaniana, Lep's World dia manana ambaratonga mihoatra ny 160, samy sarotra noho ny iray hafa. Amin'ny voalohany dia tsotra sy mora foana ny mandresy ny zava-drehetra, saingy lasa sarotra ny zava-drehetra rehefa mandroso amin'ny tontolon'ny Lep ianao. Mandritra izany fotoana izany dia manana mpilalao toa an'i Blurgg, Long John, Super Sam ary Colleen ianao, izay ao anatin'ny 8 amin'ny fitambarany. Samy mandray anjara amin'ny lalao ny tsirairay amin'ny piraty, robot ary maro hafa.
Fanafihana Galaxy: Alien Shooter
Tsy mandratra mihitsy ny manaisotra ny saina amin'ny lalao sambon-danitra izay tsy maintsy handringanana sy handresena ireo andian-tafiky ny fahavalo eny amin'ny habakabaka ivelany. Izany no antony itondranay anao Galaxy Attack: Alien Shooter, lohateny tokony hamonjenanao izao tontolo izao, miaraka amin'izay koa, ny tany, miaraka amina sambo sy fitaovam-piadiana mahery vaika.
Misy sambo vahiny an-jatony sy an-jatony maro izay mitady hanafika ny Tany amin'ny vidiny rehetra. Ny adidinao dia ny miaro azy amin'ny maha komandy anao. Azonao atao ny mampiasa modely maro amin'ny sambon-habakabaka, izay mandroso kokoa noho ny farany. Ho fanampin'izay, misy ambaratonga maro; resy ny vahiny sy ny lehiben'ny tarehy.
Ao amin'ny fanontaniana, Misy haavo 120 eo ho eo izay tsy maintsy resena mba hamonjy ny planeta iray manontolo. Mba hahavitana azy ireo amin'ny fomba mahomby, dia mila mihetsika eo amin'ny efijery ianao amin'ny alàlan'ny paompy miaraka amin'ny sambonao. Ianao dia ho afaka hampiasa tafondro mahatalanjona sy mahatalanjona fitambarana fanafihana sy tifitra amin'ny hery be, satria mila ny fanampiana rehetra ianao hiatrehana ny fanovana ny arsenalin'ny fahavalo, izay mampatahotra koa.
Galaxy Attack: isaina ho lalao hafa ny Alien Shooter tsy mety tsy hita avy amin'ny findainao Android, ho iray amin'ireo fialamboly sy tsotra indrindra amin'ny rehetra ao amin'ny Play Store. Lalao style retro io izay lalaovina indrindra amin'ny sokajy misy azy. Ao amin'ny Play Store ihany dia misy fisintomana mihoatra ny 100 tapitrisa manerantany. Izy io koa dia mirehareha amin'ny naoty 4.5-kintana matanjaka ao amin'ny magazay ary naoty naoty 2 tapitrisa tsara.
Ao amin'ny findainao Android dia tsy afaka tsy mahita lalao maivana ianao, ary PAKO mandrakizay dia iray izay tianao tokoa, noho ny fahatsorany sy ny dinamika manintona izay tsy maintsy andosiranao avy any amin'ny polisy sy izay manenjika anao amin'ny tontolo iray misy ny fijanonana. hitanao fa tsy manam-petra ary manana ambaratonga sy scenario marobe izay mahatonga ity lalao ity ho iray amin'ireo fialamboly indrindra amin'ity fanangonana lalao ilaina ho an'ny Android ity.
Mora ny manjavozavo amin'ny voalohany, toa lalao hafa fotsiny amin'ny fametrahana ny fiara io, fa ny hevitra dia tokony handosirana foana. Amin'ny voalohany dia mora ny zava-drehetra, miaraka amin'ny sakana tsotra hisorohana, saingy, rehefa mahavita mandositra ny polisy rehetra ianao ary tsy tratra dia mihasarotra hatrany ny raharaha.
Ao amin'ny PAKO mandrakizay azonao atao ny mampiasa modely fiara maromaro, izay azonao vohaina rehefa milalao sy mandroso amin'izany ianao. Ho fanampin'izany dia misy ny lisitry ny laharam-pahamehana sy ny zava-bita tokony ho tanterahina, ka misy zavatra tokony hatao foana amin'ity lohateny maivana ity.
Amin'ny lafiny iray, tsy vitsy ny izao tontolo izao; misy ny seho fiantsonan'ny fijanonana izay mahatonga ny monotonous tsy hanana olana amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izany, misy zavatra tsy fahita firy izay hitanao amin'ny fikatsahana izay hanampy anao amin'ny fikatsahanao mandositra ireo manampahefana mpampihatra lalàna. Meteza ho mpitsoa-ponenana manam-pahaizana PAKO mandrakizay ary asehoy fa tsara ianao ao ambadiky ny kodia.
Developer: Lalao lehilahy hazo
Ninja mpiady: angano ny lalao traikefa nahafinaritra
Ny voanjo ninja dia tsy dia be loatra, ary izany indrindra no antony mahatonga azy koa ao amin'ity mpiangona Ninja mpiady: angano ny lalao fitsangatsanganana, iray amin'ireo lohateny malaza indrindra amin'ny sokajy misy azy. Ity dia lalao an-tsehatra, hetsika ary ady izay tsy maintsy hifehezana ny mpiady ninjao ary handresena ireo fahavalo rehetra miafina ao anaty aloka. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy sorohinao ny vela-pandrika rehetra, ny sakana ary ny zava-tsarotra atolotra anao manerana izao tontolo izao sy ny ambaratonga amin'ity lalao ity.
Mazava ho azy, ny ninja anao dia manana fahaiza-manao, teknika ary hery izay hanampy azy amin'ny iraka ampanaovina azy. Araraoty ny fiarahan'izy ireo, ny fanafihana ary ny fitaovam-piadiana ary aza avela hisy na inona na inona hanakana anao mandra-pahatonganao any amin'ny faran'ny zava-drehetra ary handresy ny lehibe indrindra.
Ny lohahevitra dia amin'ny alina, rehefa maizina kokoa noho ny taloha ny zava-drehetra. Mahaiza mangalatra sy manam-paharetana rehefa tsy maintsy mihetsika sy mahery setra ary tapa-kevitra rehefa mila izany ny toe-javatra. Indraindray dia tsara ny miato kely ary mijery tsara ny tany hitanao. Ny zavatra tsara dia manana fiainana maro ianao mba tsy hiverenanao avy hatrany, fa ampiasao tsara; tsy te handany ny fanananao rehetra ianao.
Ity lohateny ity dia tsy manilika amin'ny maodin-dalao maromaro sy ny tantara maharesy lahatra iray izay mahatonga anao maniry hahalala bebe kokoa, fa, raha te hanao izany dia tsy maintsy mandroso manerana izao tontolo izao ianao. Ny sary dia vita tsara koa, ary koa ny feonkira. Inona koa, lalao iray hafa izay azo lalaovina ihany koa raha tsy misy fifandraisana Internet, mba hahafahanao milalao ninja amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
Developer: Lalao TOH
Ny fikambanana miafina - ny fiarahamonina miafina
Ny lohahevitr'ity lalao ity dia iray amin'ireo mahaliana sy lalina indrindra, tsy misy isalasalana. Eto ianao dia tsy maintsy mahita an'i Richard, izay dadatoanao ao amin'ny lalao. Ary io toetra io dia nanjavona tsy nampoizina tao anatin'ny toe-javatra hafahafa izay mamela be dia be ny mieritreritra. Ho fanampin'izany, tsy maintsy miaro ny fiarovana ny sangany ianao amin'ny fotoana tsy maintsy hamakivakiana tontolo samihafa handrosoana sy hahatratrarana ny tanjona.
Amin'ity lalao ity dia tsy maintsy milalao ny asan'ny mpitsongo ianao. Misy iraka mihoatra ny 7.600 hatao, ny tsirairay dia sarotra kokoa noho ny farany. Mandritra izany fotoana izany dia misy toerana efa ho 100 hamaha sy hizaha, toetra marobe izay ho hitanao rehefa mandroso amin'ny lalao ianao, minigames marobe vonona hanome anao fotoana mahafinaritra sy fanangonana mihoatra ny 1.200 amin'ireo zavatra miafina tena tsara. mahita.
Ity lalao ity dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny karazany karazany, miaraka amina 5 tapitrisa mahery ny fisintomana ao amin'ny Google Play Store ho an'ny finday Android. Ho setrin'izany, The Secret Society - The Secret Society dia manana fanehoan-kevitra efa ho 900 sy naoty tsara tao amin'ilay magazay, miaraka amin'ny naoty 4.7 kintana farany izay, tsy isalasalana, fa nahatonga azy io ho iray amin'ireo feno indrindra sy nilalao tao amin'ilay magazay. Ny zavatra iray hafa dia ity lohateny ity dia tsy maivana, fa ny lanjany kely mihoatra ny 100 MB dia mendrika azy.
Developer: G5 fialamboly
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao 5 izay tsy azonao adino amin'ny findainao Android
Antony 7 hampiasa VPN amin'ny Android